हिँडेर के फाइदा छ र ? « News of Nepal
हिँड्नु फाइदाकारक छ त भनिन्छ, तर के के फाइदा छन्, किन हिँड्ने रु धेरैसँग यस्ता जिज्ञासा पनि छन् । वास्तवमा नियमित हिँडाइले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यमा धेरै सुधार गर्छ ।
केही महत्वपूर्ण फाइदाहरु
१. मुटुको स्वस्थता
छिटो–छिटो हिँड्नु मुटुको मांसपेशीका लागि एकदमै राम्रो व्यायाम हो । छिटो–छिटो हिँड्दा मुटुको ढुकढुक गर्ने दर बढ्न जान्छ । बसिरहेको बेलाको मुटुको ढुकढुकी दरभन्दा छिटो हिँड्दा वा कुद्दा मुटुको ढुकढुक गर्ने दर निश्चय नै बढ्छ ।
यसरी मुटुको ढुकढुकी दर बढ्न गएपछि मुटुको रगत पम्प गर्ने दर पनि बढ्न जान्छ । यसले मुटुको मांसपेशीमा व्यायाम पुग्छ । शरीरका अन्य अंगका मांसपेशीजस्तै मुटुका मांसपेशीलाई स्वस्थ राख्नका लागि व्यायामको जरुरत हुन्छ ।
दैनिक व्यायामले मुटुका मांसपेशीलाई सुदृढ एवं बजबुत बनाउँछ । मजबुत मांसपेशीले अझ राम्रोसँग काम गर्छ र शरीरमा राम्रोसँग रगत एवं अक्सिजन आपूर्ति गर्न सक्षम हुन्छ ।
२. हाड–जोर्नीको लचकता बढाउँछ :
लचकता नभएका जोर्नीहरुले शरीरमा अनेक असजिलोपन ल्याउँछन् । यसले गर्दा हिँडडुल गर्नमा बिस्तारै कठिनाइ सिर्जना हुन्छ । जोर्नीहरु अररो हुने र हिँड्दा, उठबस गर्दा, कुनै शारीरिक कार्य गर्दा जोर्नीहरु दुख्न थाल्छन् ।
धेरै नै दुखाइ हुँदा चिकित्सकको सल्लाह नै लिनुपर्ने हुन सक्छ । केही समय औषधि सेवन गर्नुपर्ने र हिँड्ने वा अन्य व्यायाम गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
तर नियमित हिँड्ने गरेमा शरीरका जोर्नीहरुमा यस किसिमको अररोपन आउँदैन, अर्थात् जोर्नीहरुमा लचकता कायमै रहन्छ । हिँड्नु जोर्नीहरुका लागि कुद्नुभन्दा बढी लाभदायक छ ।
३. हाडहरुलाई मजबुत गराउँछ :
हाम्रो उमेर बढेसँगै हाडहरुको घनत्व पनि कम हुँदै जान्छ । वास्तवमा हाडको घनत्व ९द्ययलभ मभलकष्तथ० हाडमा उपलब्ध हुने खनिजहरुको मात्रामा निर्भर हुन्छ । हाडको घनत्व कम हुँदै गएमा उमेर बढ्दै जाँदा हाड फुसफुस भएर कमजोर हुने अस्टियोपोरोसिस रोग लाग्छ ।
अस्टियोपोरोसिस भएपछि हाड कमजोर हुन्छ र साधारण ठोक्काइबाट पनि भाँच्चिने, टुक्रिने हुन सक्छ । तर व्यायामले हाडहरुको घनत्व राम्रो बनाइराख्न सहयोग गर्छ । यदि तपाईं पनि कुनै व्यायाम गर्नुहुन्न भने भोलिदेखि नै हिँड्न शुरु गर्नुहोस् ।
हाडहरुलाई स्वस्थ राख्नको लागि हिँडाइ उत्तम व्यायाम मानिएको छ । हिँडाइले हाडलाई आवश्यक पर्ने खनिजको आपूर्तिमा सहयोग गर्छ र हाडहरुलाई मजबुत बनाइराख्न मद्दत गर्छ ।
४. ढाड दुखाइमा फाइदा गर्छ :
अधिकांश ढाड दुखाइको कारण गलत किसिमको बसाइ र ढाडको मांसपेशीहरुमा क्षति पुग्नु नै हो । लामो समय एकै किसिमको पोजिसनमा बस्नु र ढाडलाई कुनै सपोर्ट नदिई बस्नु पनि हो । ढाड दुखाइबाट मुक्ति पाउने राम्रो उपाय भनेको कुर्सी छोडेर उभिनु हो ।
कुर्सीमा एक घण्टा जति बसेर काम गरिसकेपछि एकछिन् कुर्सी छोडेर उभिनु, कुराकानी गर्नु, अफिसमै एकछिन् हिँड्नु ढाडका मांसपेशीलाई आराम दिने र तनावरहित बनाउने राम्रो उपाय हो । दैनिक कम्तीमा ३० मिनेटजति हिँड्दा ढाडका मांसपेशी मजबुत हुनुका साथै लचकतामा पनि वृद्धि हुन्छ । यो ढाड दुखाइबाट मुक्त हुने राम्रो उपाय हो ।
५. उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा सहज :
विभिन्न कारणले मानिसमा रक्तचाप वृद्धि हुन्छ र रक्तचाप बढेपछि यसैका कारण हृदयघात हुने सम्भावना पनि बढ्छ । स्वस्थ एवं मजबुत मुटुले कम प्रयत्नबाट नै शरीरमा धेरै रक्तप्रवाह गर्न सक्छ । यसले रक्तनलीहरुमा कम असर पार्छ । दैनिक कम्तीमा १० मिनेटजति हिँड्दा मात्र पनि उच्च रक्तचापमा सकारात्मक असर आउँछ ।
त्यसैले दैनिक ३० मिनेटजति हिँड्दाचाहिँ उच्च रक्तचापमा सकारात्मक परिणाम देखिन्छ । औषधि उपचार गरेर देखिने प्रभाव नियमित हिँडाइबाट नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । हिँडाइले उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भए तापनि उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्नुपर्ने औषधि परिवर्तन गर्नुपर्दाचाहिँ सम्बन्धित चिकित्सकसँग नै परामर्श गर्नुपर्छ ।
६. ब्लड सुगर नियन्त्रणमा सहयोग :
प्रयोग नभई बसेको ग्लुकोजको मात्रा रगतमा धेरै भएमा ब्लड सुगर उच्च हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । जब शरीरले ग्लुकोज प्रशोधन गर्न र ब्लड सुगर लेवललाई ठीक अवस्थामा राख्न सक्तैन त्यस बेला डायबिटिज हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अनि इन्सुलिनमार्फत उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
ब्लड सुगर लेवललाई सन्तुलित बनाइराख्नका लागि व्यायाम सबैभन्दा ठूलो उपाय हो । यसका लागि हिँड्नु उत्तम विकल्प हो । व्यायाम गर्नुअघि र व्यायाम गरेपछिको ब्लड सुगर लेवल जाँचेर हेर्दा पनि हिँडाइको प्रभावकारिता थाहा पाइन्छ ।
७. मेटाबोलिजममा सुधार :
८. फोक्सोको कार्य सुधार गर्छ :
फोक्सोले शरीरमा प्राणवायु उपलब्ध गराउँछ । स्वस्थ फोक्सोविना पर्याप्त प्राणवायु शरीरमा उपलब्ध हुन सक्तैन । पर्याप्त प्राणवायु प्राप्त नहुँदा शरीर स्वस्थ हुन सक्तैन । हिँड्दा शरीरका अन्य अंगसँगै फोक्सोमा पनि राम्रो व्यायाम हुन्छ ।
व्यायाम गरेर फोक्सोलाई सुदृढ गर्छ, जसले समग्र स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सहयोग गर्छ । आराम गरेर बसिरहँदा भन्दा हिँड्दा शरीरमा फोक्सोले धेरै अक्सिजन उपलब्ध गराउँछ । नियमित हिँडाइले फोक्सोलगायत समग्र स्वास्थ्यमा लाभ पुग्छ ।
९. तनाव घटाउन पनि मद्दत पुग्छ :